World Archives - Page 38 of 38 - Puntland Mirror Believable Media Website
Booliska Kiinya ayaa ka codsaday dadka magaalooyinka Mombasa, Malindi iyo Nayroobi in ay feejignaadaan kadib markii macluumaad sirdoon uu muujiyay in maleeshiyada al-Shabaab ay qorshaynayso weeraro ay qaado inta lagu jiro bisha Ramadaan. Bayaan uu […]
Feeryahankii caanka ahaa Muhammad Ali ayaa geeriyoodey habeenimadii xalay isaga o ah 74 sano jir. Sida ay qortey Warbahinta NBC. Geerida Muhammad Ali waxaa waxaa xaqiijiyey afhayeenka qoyska Mohammad Ali. Muhammad Ali ayaa geeriyoodey fiidnimadii […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s President Mohamed Abdullahi Farmajo is cutting short his Ethiopia trip and will return to Mogadishu to attend the state funeral of public works and reconstruction minister who shot dead in Mogadishu last [...]